जानकाी मन्दीर दर्शन गर्न पाउनु मेरो सौभाग्य हो ः मोदी - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
जानकाी मन्दीर दर्शन गर्न पाउनु मेरो सौभाग्य हो ः मोदी
Published On : २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १२:२१
जानकी मन्दीरको दर्शन गर्न जनपुर पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जानकाी मन्दीर दर्शन गर्न पाउनु आफ्नो सौभाग्य भएको बताएकाछन्। शुक्रबार सिधै हेलिकप्ट मार्फत जनपुर आएका मोदीले दर्शनको लागि नेपाल सरकार प्रान्त सरकार र स्थानीय सरकारले मिलाएको प्रवन्धबाट निकै खुसी भएको भन्दै आभार प्रकट गरेका छन्।
उनले आफ्नो स्वागतमा काठमाडौंबाट आएर मिलाएको प्रवन्ध राम्रो भन्दै ओलीको उच्च प्रशंसा गरे। मोदीले आफूलाई गरेको यो सम्मा हजारौ वर्षदेखिको दुई देशको सम्मान र सवा सय करोड हिन्दु स्थानका नागरिको सम्मान भएको समेत बताए। सोमबारबाट निर्माणको लागि आरम्भ हुने रामायण सक्रिटले दुई देशकमा धार्मिक पर्यटक विस्तारमा सहयोग पुग्ने मोदीको भनाइ थियो।
त्यस्तै शुक्रबाबाट सुरू हुने जनपुर अयोध्या भारत सिधाबस सेवाले पनि दुई दशेको सम्वन्ध विस्तारमा साथै जनाता देखि जनता सम्मको सम्वन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने मोदीको भनाई छ। उनले अयोध्या र जनकपुरको नाता अतुट भएको र अवस्मरणिय भएको समेत बताए। उनले नेपाल भारतको सांस्कर्ति र आर्थिक सम्वन्ध थप प्रगाढ गरउाने यो भ्रमण सहयोग पुग्ने समेत बताएका छन्।